आलुले बजार नपाउने हो कि भन्ने किसानको चिन्ता हट्यो ! - नेपालबहस
आलुले बजार नपाउने हो कि भन्ने किसानको चिन्ता हट्यो !
| १५:०६:१६ मा प्रकाशित
◊ जमुनावर्षा शर्मा
३१ भदौ, पोखरा । मुस्ताङ घरपझोङ–२ महेन्द्रसिंह लालचनलाई आलु उत्पादन गरेसँगै यसको बिक्रीको चिन्ता थियो । कोभिड–१९ का कारण उत्पादित आलुले बजार नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका लालचन यतिबेला भने निकै खुशी छन ।
उनले सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेको तरकारीको बजार व्यवस्थापनका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको र योसँगै स्थानीय र स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताए । उक्त बिक्री केन्द्र पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गरिएको हो । सहकारीमा हाल १२० सदस्य छन् । रासस
कफीमा अज्ञात रोगले बोट सुक्न थालेपछि किसान मर्कामा ११ घण्टा पहिले
कलिलैमा किसानले किवी टिपेपछि समस्या ३ दिन पहिले
अज्ञात रोगले बाख्रा मर्न थालेपछि किसान चिन्तित ३ दिन पहिले
किसान भन्छन् : सक्छौ तोकिएको मूल्य देऊ, सक्दैनौ चिया फिर्ता देऊ ! १ हप्ता पहिले
आईपीएलमा मयंकको पहिलो शतक छायामा ! राजस्थानको किर्तिमानी जित २७ मिनेट पहिले